Iimpawu zomoya: iGemini, iLibra, iAquarius; Konke malunga ne-Element yakho - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Iimpawu zomoya: iGemini, iLibra, iAquarius; Konke malunga ne-Element yakho
Iimpawu zomoya kuthiwa zezona zikrelekrele kwaye zinobuchule kunxibelelwano. Fumanisa ukuba le nto izichaphazela njani iimpawu zomoya kunye neempawu zabo.
Imiqondiso yomoya emithathu isikelelekile ngobukrelekrele obukhulu kwaye ihlala ithatha ingqiqo kunye nengqiqo. Abemi beli nqaku abazivumeli ukuba babanjwe ziimvakalelo, izinto eziphathekayo okanye izimvo zabanye abantu. Ngamafutshane, bangabantu babo kwaye banebhongo ngokuba njalo! Ukuba uyiGemini, iLibra okanye iAquarius, ungowosapho lwezifundiswa kwaye uphakathi kwabona bantu banobuntu obukhoyo! Funda ngakumbi malunga nentsingiselo yeli nqaku, iimpawu ezinxulumene nazo, iiplanethi kunye nokuhambelana kothando.
Kuthetha ukuthini ukuba kweli qela lezinto?
Zeziphi iimpawu eziqhelekileyo le miqondiso yabelana ngazo?
Ngoobani iiplanethi zabo ezilawulayo?
Yintoni abafana nentlalontle kunye nobungcali?
Isixhobo somoya yinto Isithathu sezinto ezine apho ukuvumisa ngeenkwenkwezi kusekelwe ekuhleleni imiqondiso yeenkwenkwezi ngokufana kwazo. Yinto yobudoda (njengoMlilo) kwaye iyavuma isenzo kunye nefuthe. Inika imiqondiso yayo ngezakhono zonxibelelwano eziqaqambileyo kunye namandla amakhulu emfundo. Isazi ngeenkwenkwezi, uSusan Taylor uyacacisa Impembelelo yeli qela kwiGemini, iLibra kunye neAquarius.
Uthando lwenombolo ye-222
Iimpawu zomoya: Gemini-Meyi 21-Juni 21 Libra-Septemba 23-Okthobha 22 U-Aquarius-uJanuwari 21-Februwari 19
Kuthetha ntoni ukuba luphawu lomoya?
Njengobuntu obubonakalisa kubo, Iimpawu zomoya ngabantu abazilungelelanisa ngokukhululekileyo kwihlabathi elibangqongileyo, kwaye bathanda ukungqongwa kunye nokutshintshiselana nabanye. Uphuhliso lwabo ikakhulu lusentsimini, apho bagqwesa khona. Uyacinga kwaye ukrelekrele, aba bantu bathanda ukunxibelelana, nangayiphi na indlela. Adept par ukugqwesa kokuqiqa kunye nokuqonda, obu buntu bubonakaliswa ngengqondo yabo engenasiphako. Nangona kunjalo, xa kusithiwa, banesiphene esinye esiphambili esivamise ukubabamba; banengxaki yokuzibekela iinjongo kwaye banamathele kuzo, oko kuthetha ukuba amaphupha abo ahlala engafezekiswanga ... Iimpawu zomoya ziinkokheli eluntwini. Banokwazi ukubona iimeko ngokwembono yengqondo ngaphandle kokuphazanyiswa yimvakalelo.
Iimpawu ezimbini eziqhelekileyo kwiimpawu zomoya
1. Banomoya ophakamileyo
Aba bantu bazalwa benengqondo ezibukhali. Bazi t Ukuzikhusela kunye nokuqonda kwaye banokuziva besoyikiswa ukuba izimvo zabo okanye iimpawu zabo zobukrelekrele ziyathandatyuzwa. Bayathanda ukungqongwa ngabantu abaphumayo kwaye thanda umbono wokutshintshiselana nabanye. Bayachuma ngaphezu kwakhe nabani na kwezentlalo.
2. Ngokunjalo, bayakonwabela ukukhanya okukhwankqisayo
Nangona banomdla kwizinto ezininzi, ezi zinto ngamanye amaxesha kuthiwa azikho ngaphezulu kwaye zitshintshatshintsha. Umoya emva kwayo yonke into ebonakalisa inkululeko , kwaye ngelixa lo ingumgangatho ophambili wale miqondiso, banokuba njalo ukungazithembi, ukungagxili nokungazinzi.
Injani le nto yothando ?: Bacinga yonke into
Imiqondiso yomoya ayikhethi bodwa xa kufikwa kuthando kwaye bahlala behendeka ukuba bangathembeki. Uthando lubalulekile kubo, nangona kunjalo aba bantu abathandi ukubotshwa nakweyiphi na inkalo yobomi. Bacinga nzulu, ukanti banengxaki yokuvumela iimvakalelo zabo ukuba zithethe. Babo iingcinga zibalawula, kwaye bahlalutya yonke imeko, bade bafike kwinqanaba lokuthandabuza izizathu zabantu. Oku kuziphatha kukrokrela kuthetha ukuba banako ke ngoko Vumela amathuba athi shwaka, ngakumbi xa kufikwa kubudlelwane kunye nezesondo.
Ngokwecala labo lobuchwephesha, badla ngokubuza imibuzo emininzi kunokuba banikezele ngokukhululekileyo kwiminqweno kunye neemvakalelo, kwaye abantu abaninzi bakujonga oku njengokucima. Iindaba ezimnandi zezokuba aba bemi behlabathi, nangona kunjalo, bakulungele ukufunda kwindawo yobudlelwane kwaye ayinyanzelekanga ukuba izibophelele. Amaqabane abo ayazixabisa izakhono zonxibelelwano ezigqwesileyo, uburharha kunye nokuzimisela ukwabelana.
Ukuphoswa ngamathuba olonwabo kunye nothando kuthetha le miqondiso umzabalazo wokuzibophelela. Nangona uthando luyindawo apho le miqondiso mithathu ifuna ukufunda ngakumbi, ngelishwa banokujongana neqabane ngubani ongakwaziyo ukusombulula ukungazithembi kwabo.
Intsingiselo yamanani kwitshathi yebhayibhile
Ngubani onako ukuthabatha uphawu loMoya?
Ukuze ulukuhle umntu ozelwe phantsi kwale nto, kufuneka uyihloniphe imfuno yabo yenkululeko kwaye ubayeke baphefumle. Abaxhasi babo kufuneka babenakho ukuxoxa ngokucacileyo kuba abemi boMoya bazithiyile iimeko ezifihlakeleyo. Bakhetha abantu abagqithisileyo, kodwa ngakumbi abo bangabenzi nzima ubomi kwaye bajolise kwicala elilungileyo lezinto.
Zeziphi ezona midlalo zothando zibalaseleyo kuMoya?
Ukuhambelana kweHososcope kubaluleke kakhulu xa kufikwa ekufumaneni uthando. Ngubani onako ukweba intliziyo yakhe?
I-Chemistry phakathi koMoya noMlilo: Zihamba ngokumangalisayo.
Babelana ngokwentlalontle nangaphandle. Bayonwaba kwaye Yazi indlela yokunika amandla omnye nomnye. Ukuba uphawu loMlilo luzama ukuyalela, umoya uyayazi indlela yokubeka endaweni yabo ngobuchule ...
Ukuhambelana komoya kunye noMoya: Bayayiqonda kwaye bayayixabisa enye nenye
Bona baqonde kwaye baxabisane kwaye xa benento yokuthetha, bayayenza ngokwasemthethweni. Ke, banokuhamba
kude, ngenxa yencoko yabo yencoko, nangona kunjalo, bobabini bafuna ukukhanyisa izinto ...
Ngaba iimpawu zomoya ziyahambelana neempawu zomhlaba? - Ewe!
Uphawu lomoya lunezimvo ezininzi, bayathetha, bayakhanya, banomoya, bayahlekisa, kwaye bayawuthakazelela umqondiso woMhlaba, obanceda ukuba baqonde amaphupha abo kunye nemibono.
Ngaba umoya noManzi ziya kuhamba? - Lo ngumdlalo ongalindelekanga
Esi sibini siza kuqala, nangona, ekuhambeni kwexesha, icala elinemvakalelo kunye novakalelo lwaManzi luya kucaphukisa Umoya kwaye ungazithoba ...
Iimpawu zomoya kunye neeplanethi zabo ezilawulayo
Impembelelo yeeplanethi ekuvumiseni ngeenkwenkwezi kubalulekile. Iplanethi yakho imisela indawo enkulu kubuntu bakho, ke yeyiphi ulawula eli qela lemiqondiso?
IGemini ilawulwa yiMercury
Ukuhlalisana kwaye unomdla wokudibana kaninzi, iGemini phantsi kwefuthe leMercury zombini Ukuhamba kunye nokubaleka, ndingafuni kubotshwa nantoni na okanye nabani na.
uyifumana njani indlela yakho yobomi
ILibra ilawulwa nguVenus
Enkosi kuVenus, uLibra uyazi ngokwendalo baveze iimvakalelo zabo kunye neminqweno. Unobuhlobo kwaye unobuhlobo, uLibra uyakwazi ukufumana okuhle kubo bonke abantu.
U-Aquarius ulawulwa ngu-Uranus
Eyona nto iphambili ku-Aquarius yinkululeko yabo. Yoqobo kunye nokuzimela, lo mqondiso unemibono emitsha, ye-avant-garde, ehlala ibenza ukuba bangaqondwa kakuhle, kodwa i-Uranus ayinalo lonke ucalucalulo!
Zithini iimpawu zomoya ezifana nobungcali nentlalontle?
Iimpawu zomoya zine visceral isidingo sonxibelelwano lwasentlalweni. Bafuna unxibelelwano nabanye kunye nonxibelelwano olunzulu kuba ubomi babo ekuhlaleni bubaluleke kakhulu kubo. Emsebenzini, banokuziqhelanisa ngakumbi kwaye Konwabele ukusebenza njengeqela kunye nokusebenzisana nabanye abantu. Abalibali iminqweno yabo yobuqu kunye neyabo, kodwa abalahlekwa sisihlwele, kwaye banobugcisa bokuvela kumaqela asebenzayo. Banesiphiwo xa kufikwa ekuthetheni esidlangalaleni kwaye nokuba injani imvelaphi yabo, kufuneka bazivakalise kwaye bafunde yonke imihla ukuze bazityebise ngokwasengqondweni. Iimpawu zomoya rhoqo zilungelelanise ukuze zihambisane namaxesha Kwaye ngokuqinisekileyo awoyiki utshintsho.
Funda phezulu kwizinto zodiacac ukuze ufunde ngakumbi ngobuntu bakho. Izinto zakho zinokuchaphazela nekamva lakho, ke jonga i-horoscope yakho ye-2021 apha.
Izizathu ezi-5 zokuba kutheni ufanele ukuwela i-Leo yenyama
fumana uphawu lwenyanga yam
indlela yokwenza umntu we-sagittarius athande
uphawu olutsha lwe-zodiac 2016
lithetha ntoni i-12 ngokwasemoyeni
Kuthetha ukuthini ukuphupha ngabantu abaswelekileyo
ukubala indlela yokuphila yobalo